Khubarada Baara Kimikalka oo gaaray magaalada Douma, SYRIA • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Khubarada Baara Kimikalka oo gaaray magaalada Douma, SYRIA
Khubarada ka socota Qaramada Midoobay ee baareysa weerarkii hubka kimikalka ayaa maanta oo Arbaca ah gaaray deegaanka Douma ee wadankaasi Siiriya oo ah halka weerarkaasi ka dhacay labo todobaad kahor.
Kooxdan khubarada ah ayaa Sabtidii lasoo dhaafay gaaray Caasimada Dimishiq balse waxa loo diiday maalmihii lasoo dhaafay inay tagaan deegaanka Douma oo ay hada gacanta ku hayaan ciidamada Bashar Al Assad iyo Militariga Ruushka.
Dowlada Maraykanka iyo xulafadeeda ayaa ku eedeeyey Ruushka inuu doonayey inuu burburiyo cadeynmaha gumaadkii ka dhacay Douma kahor intaysan halkaasi gaarin wafuuda ka socota Qaramada Midoobay.
Balse Ruushka ayaa sheegay in ay sugayeen amaanka deegaankaasi oo todobaadkan gebi ahaan laga saaray xoogaga mucaaridka.
Maraykanka, UK iyo France ayaa Sabtidii lasoo dhaafay duqeynmo la beegsaday xarumaha lagu sameeyo kimikalka ee dowlada Siiriya iyo goobo kaydka hubka u ahaa, walow aan illaa iyo hada la heyn cadeyn rasmi ah oo muujineysa in dowlada Bashaar hubka kimikalka u adeegsatay deegaanka Douma, eedeyntaasi oo ay weli iska fogeenayaan xukuumada Dimishiq iyo xulafadooda Ruushka.